सिधा कुरामा दयाहाङ राई ! भन्छन – ‘नेपालमा अहिले कि अनमोल केसी कि म नै हो’(पुरा अन्तरवार्ता सहीत)
Home / समाचार / सिधा कुरामा दयाहाङ राई ! भन्छन – ‘नेपालमा अहिले कि अनमोल केसी कि म नै हो’(पुरा अन्तरवार्ता सहीत)
सिधा कुरामा दयाहाङ राई ! भन्छन – ‘नेपालमा अहिले कि अनमोल केसी कि म नै हो’(पुरा अन्तरवार्ता सहीत) 0
नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता दयाहाङ राईले आफ्नो १५ बर्षको सिनेमा करीयरको अति गोप्य कुराहरु सार्वजनिक गरेका छन । एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा दयाहाङले ति रहस्यहरु खोलेका हुन । पछिल्लो समय सधै एकै किसीमको अभिनय गर्ने भनेर आलोचना खेपिरहेका अभिनेता राईले आफुलाई फरक चरित्रमा उतार्ने निर्देशक नै नआएको पनि बताएका छन ।
अन्तरबार्तामा दयाहाङले अहिलेका सुपरस्टार अनमोल केसीको बारेमा पनि मुख खोलेका छन । घुमाउरो पारामा उनले नेपालमा अहिले कि अनमोल केसी कि दयाहाङ चल्ने गरेको पनि बताए । दयाहाङ राईको निकै रोचक टेलिभिजन अन्तरवार्ता तलको भिडियोमा हेर्नुहोस
दिलिप रायमाझी किन भए ’ब्याक टु नेपाल’